Caawinta eCourse & eBook-ka - Carl Henry ONLINE! GO'AANKA
9 Tallaabooyinka loo maro ONLINE! WAXYAABAHA LAGU HESHO SIXXADDA XAGGA - daawo hadda Kadib hoos u riix ..,
Tababar Tababar LACAG HELO
Isku qor 24 Saacadaha / 7 Maalmo wakhti ayaad heleysaa;
Tilmaamo bilaash ah si aad u dejisid Adigaaga Online
EBook-ga bilaash ah
Helitaanka qalabkeyga gaarka ah & Khayraadka
Kaliya Ku-qor magacaaga iyo Emailka
Waxaan sameyn karnaa! La wadaag ama iibso macluumaadkaaga
GDPR, Kukiyada & Khaaska ah - Shuruudaha &
ONLINE WAXQABADKA - 60 Liiska labaad ee Liiska - 9 Tallaabada Tallaabada! si loo sameeyo ganacsi internet ah
Ku guuleysta Khadka tooska ah wax soo saar kasta, adeeg kasta, hiwaayad, ganacsi, urur ama xitaa inaad lacag ku uruuriso sadaqaddaada ama bulshada!
Waa kuwan tallaabooyinka 9 ee aad ku aragtay fiidiyowga, waxay sidoo kale ku jiraan eCourse bilaash ah, laakiin faahfaahin dheeraad ah, tilmaamo tallaabo tallaabo tallabo ah, qalab gaar ah iyo ilaha aad u baahan tahay si aad u guuleysato!
1) Waxay doortaan mawduuca Niche
Xaqiiji in ay ku habboon tahay xirfadahaaga, xooggaaga, jilicsanaanta, xiisaha, iyo inaad ka heshid farxad!
2) Abuuri Gaadiidka Targeted
Gaadiidka ugu fiican ayaa noqon doona dad; waxaad xiiso u qabtaa mawduuca aad daboolayso oo ay haystaan ​​baahi aan weli haysan oo aad ku siin doonto xalka ama jawaabta.
3) Samee Liiska Email
Waxaad u baahan tahay hab laguugu soo celiyo magaca iyo cinwaanka emailka dadka ee ku soo biiraya liiska emailkaaga adiga oo buuxinaya foom gaaban.
4) Sii hadiyad
Bixi martiqaadkaaga booqdayaasha hadiyado qiimo sarreeya oo bilaash ah oo loogu talogalay cinwaanka emailkooda.
Ka dib markay dadku ku siiyaan cinwaankooda emaylkooda waxaad u baahan tahay nidaam aad ku gaarto emayllada dhista xiriir, xusuusi inay tallaabo ka qaadaan & alaabo dheeri ah.
6) Xulo alaabta la iibsado
Waad iibin kartaa badeecadaada ama dadka kale, kaliya xaqiiji inay u dhigmayaan maadadaada qaaliga ah & qaaliyana in lagu bilaabo.
7) Lacag aruurin khadka
Ku bilow adoo furaya ama adeegsanaya koontada PayPal si aad wax u iibsatid oo aad lacag ururin & u isticmaashid qalab wax soo saar oo lacag kuugu ururinaya.
8) Suuq Bilaash ah & Lacag Bixin
Abuurista gaadiidka bilaashka ah waxay qaadataa waqti badan sidaas daraadeed qaar ka mid ah ilaha bixiya bogga martida si loo dedejiyo natiijooyinkaaga.
9) Setup Domain, martigelinta & websaydhka
Website-yada bilaashka ah waa suurtagal laakiin ganacsi wax-ku-ool ah oo internetka leh ayaa leh magaciisa magaciisa gaarka ah wuxuuna leeyahay bog internet oo xirfad leh si loo helo natiijooyinka ugu wanaagsan.
Qaado tallaabo hadda adigoo diiwaan gelinaya hoos!
Waxaan sameyn karnaa! La wadaag ama iibso macluumaadkaaga - GDPR, Kukiyada & Khaaska ah - Shuruudaha &